पारसकी छोरी पूर्णिका भन्छिन् ‘संसारमा सबैभन्दा ‘मूर्ख’ मान्छे आमाबुवा हुन्’ ! (भिडियोसहित) - SandeshMedia.com
पूर्णिका शाह पूर्वयुवराज पारस शाह र हिमानीको जेठी छोरी हुन् । उनी अध्ययनका लागि थाइल्याण्डमा छन् । सामा’जिक सञ्जालमा निकै सकृय पूर्णि’काले निकै भावुक’ कथा र स्टाटस लेख्छिन् ।
उनका ति कथा र स्टाटस कसै न कसैको जिवनमा मेल खाने खालका हुन्छन् । उनले निरन्तर सार्वजनि’क गर्ने त्यस्ता स्टाटसले कुनै बेला नेपालको शक्तिमा रहेको राजपरिवार’का बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ ।
कुनै समयमा एकछत्र राज गरेको राज’सस्थाका परिवारका सदस्यका बारेमा सर्वसाधारणको अहिले पनि उत्तिकै चासो छ । त्यसैले उनले लेखे’का ति स्टाटसमा थुप्रै कमे’न्टहरु आउँछन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणसंग प्रत्यक्ष कुरा’कानी पनि गर्छिन । उनलाई सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिने गरेकी छन् ।
त्यसैले उनलाई सर्वसाधारणले निकै मन प’राएको देखिन्छ । निकै शालिन र भद्र श्वभाव रहेको अनुमान उनले लेख्ने भावनावाट बुझ्न सकिन्छ । साथै उनले दिने उत्तर पनि त्यस्तै हुन्छन् । उनले हालै सामाजिक सञ्जालमा आमा’ प्रति समर्पित निकै मार्मीक कथा लेखेकी छन् । जसलाई धेरै मानि’सले मन परा’एका छन् ।
निकै लामो कथा धेरै मानिसले पढे’को त्यसमा आएको प्रतिकृयावाट बुझ्न सकिन्छ । हालै उनले एउटा अर्को स्टाटस’ पनि लेखेकी छन् । जुन व्याग्यात्मक छ । उनले लेखेकी छन्
“संसारमा सबैभन्दा ूमूर्खू मान्छे आमा बुवा हुन ! आमा बुवा नै हुन हामिलाई जन्म दिने हामिलाई हिड्न सिकाउने ! हाम्रा लागि सबै थोक बलिदान गर्ने संसा’रका दुई मूर्ख ती ‘हुन आमा बुवा ! पैसा नभएपनी हामिलाई कहिल्यै भोकै राखेनन् ! उनिहरुमा त्यस्तो कुनै शक्ति छैन साधारण मान्छे मात्र हुन ! तर उनीहरुले’ हामिहरुलाई हरेक परिस्थिति बाट जोगाउन उत्तम प्रयास गर्छन् !
बाआमा हरु धेरै प्रतिभासाली हुदै’नन् तर हाम्रो जिबनलाई चम्काउने ब्रसको भाती सहयोग गर्छन् ! बिमार् हुदा बाआमाले चिसो नलागोस टाइफाइड नहोस् भनेर खानेकुरामा अत्याधिक रेखदेख गर्छन् !
आमा बुवा हाटबजार मेला पात हिड्दा अ’क्सर केही खान चाहन्छ्न १ तर, खादैनन आफ्नो सन्तानलाई सम्झिनछन सन्तानको लागि भोकै बसेर केही रकम जोगा’उछ्न ! चाडपर्वमा बाआमालाई केही नयाँ कपडा फेर्न मन हुन्छ फ़ेरि सम्झनछन सन्ता’नको लागि जोगाउनु पर्छ !
बाआमा संसारको सबैभन्दा कडा-कर्मठ मान्छे हुन ! आमा बुवा बाकी जिबनको लागि मेहनत गर्छन्, सन्तान’को मुख हेरि खाने र पि उ ने हेर्छन् ! प्रेम धर्म हो , प्रेम कठिन हुन्छ , तर हामीले बास्तबमा बुवा आमालाई बुझेका नै हुदैनौं ?
बुवा आमाको माया हामी छोराछोरीको ला’गि समुन्द्र जस्तो गहिरो हुन्छ १ बुवा आमा’को ब’लिदानलाई कहिले हामी छोराछोरीले बुझेका हुदैनौ बुवा आमा हामिलाई बिना स्वार्थ माया’ गर्छन् ! बुवा आमा संग हाम्रो साथ यो जन्ममा धेरै छोटो हुन्छ !
त्यसैले घरमा भएका बुढा बाआमा’लाई सदैव माया प्रेम सद्भाव गर्नुहोस् ! ताकी पछि तपाईंको छोराछो’रीले बुढेसकालमा तपाईंलाई अहिले तपाईंको बाआमा’लाई तपाईंले गरेको माया प्रेम देखेर पछि यसैगरी माया गरून् ! जय जननी जय नेपाल”
१० श्रावण २०७८, आईतवार ०३:२६